Rhubarb | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Tsara sy mahasoa, fomba famolavolana fandriana amin'ny voninkazo ao an-jaridaina
Ny lovia rehetra dia afaka manampy tsirinaina farafaharatsiny miaraka amin'ny fanampiana amin'ny zava-manitra. Afaka mividy any amin'ny fivarotana iray izy ireo, fa matetika amin'ny ririnina dia mora ny mahita ny volom-boly amin'ny vidiny mirary. Manolotra ny sainao ho lisitry ny zavamaniry matavy, ny fambolena izay azo atao ao amin'ny dacha. Aiza no hampisy herisetra marevaka Azo atao ny mametraka ny voankazo matavy na aiza na aiza, ny tena zava-dehibe dia ny mamaritra ny haben'ny vitaminina vitamina.
Fanangonana rharbarb amin'ny ririnina: fomba ahoana no hamonjena legioma
Noho ny tsirony tsy mahazatra dia nahazo mpankafy maro i rhubarb. Amin'ireo karazana zavamaniry 40 malaza, dia 6 monja no mambolena ho an'ny tanjona ara-tsakafo. Ny tena mahazatra dia: fingotra, legioma sy legioma matevina. Ny fomba tsara indrindra hanavotana rharbarb ary mahazo ny ampahany amin'ny vitamina ho an'ny ririnina dia homemade.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Rhubarb